जम्मा ३ महिनाको उमेरको नानीलाई नजिकै आइरहेको सरस्वती पूजामा कान छेड्न स्नातकोत्तर अन्तिम वर्षमा पढ्दै गरेकी मेरी एक आफन्तले दिएको सुझाव मलाई व्यवहारिक लाग्दै लागेन । उनको पुरानो तर्क थियो, कान छेड्नाले शिक्षाको मुहान फुट्छ, साना मुन्द्रा, टप आदि गरगहना पहिरिदा छोरीको शारिरीक सौन्दर्य बढ्छ, संस्कार धानिन्छ । समाजमा घुलित भइन्छ । उनको तर्क एक प्रकारले सोच्दा राम्रै होला तर १ वर्ष पनि नपुगेकी सानी छोरीका कोमल कानका लोती फोडेर अनावश्यक मुन्द्रा र टप लगाइदिएर मलाई संस्कृति धान्ने, सामाजिक हुने, छोरीको सौन्दर्य बढाउने कुरा पटक्कै मन परेन । तर्क वितर्क बढ्दै गयो ।
हो मलाई विवाह पछि सन्तानको रहर पलायो, जुन अक्सर सबै दम्पतीमा पलाउछ । श्रीमतीसंग सबै खाले सहकार्य पछि यो सबै सम्भव भयो र छोरी यस धर्तीमा आइन । मेरो रहरले मैले सन्तान जन्माए भन्दैमा मलाई मेरो नानी माथी मेरा अरु ईच्छा र रहर लाद्ने र पूर्ति गराउने अधिकार छ र ? सदियौं वर्षदेखि चलेका चलन भन्दैमा के मैले छोरीको मनोविज्ञान नै नबुझी यो यति कम उमेरमै किन उसको कान छेडौं ? मलाई लाग्छ, भोली छोरीले आफै समाजको यो बृहत शब्दकोष पढ्नेछिन् अनि उसलाई ठिक र बेठिक लागेका सबै कुरा उसले उसकै मर्जिमा गर्नुपर्दछ । म उसको इच्छा विपरित र सिफारिस विना कान, नाक छेडेर बाल अधिकार हनन गर्न सक्दिन । जन्म दिए“, अभिभावक हु तर त्यो भन्दैमा मैले उसको इच्छा विपरित संस्कृतिलाई धान्ने नाममा यस्ता सबैखाले कुरिती र संस्कार पछ्याउन आवश्यक छैन । यो मेरो बुझाइ हो । म सांस्कृतिक तक्माहरु अनावश्यक पहि¥याउन हुदैन भन्छु ।
छोरी बारे मेरो यो धारणा छ कि सबै कुरा उसले बुझोस र लियोस । मातृवादी लेखिका Simon de Beavoir उनको the second gender मा भन्छिन– one is not bornawoman, rather one becomes one"म चाहन्छु मेरी छोरीलाई लैङ्गिक विभेदको खाल्डोमा नफसाइयोस् । उसको अस्तित्व जन्मदेखि अनन्त कालसम्म नडगमगाओस् । समाजले ऊ मिसिन भन्दा अघि नै बनाएका जन्जिर र ढाटहरुले उसको यात्रामा बाधा नपु¥याउन उसले यी सबै जाललाई समाल्न सकोस् । ऊ स्वतन्त्र चरी झै होस् । मन लागेको ठाउमा उडान भर्न पाओस । समयले उसलाई नाइटिङ्गेल बनाओस, मेनका बनाओस, वा बेली नाच नाच्ने नर्तकी बनाओस, नाक कान छेडेर एउटा अधिनायकवादी पालकले तान्ने उसको पशुजस्तो भविष्य नबनोस । म आजैबाट उसको सुन्दर भोलिको जग हाल्दैछु तर मेरा आफन्त कहिलेकाही मलाई उनीहरुको अर्ति बाड्छन् जो मलाई पाच्य छैन ।
अस्ति भर्खर छोरीको जन्म हुन केही दिन अघिसम्म ग्राण्डी हस्पिटलमा श्रीमतीको पाठेघरको अन्तिम अल्ट्रासाउण्ड सकेर डाक्टर शर्माले मेरी श्रीमती र मलाई संयुक्त बधाई दिए । हामी हाम्रो सन्तानको नजिकिदो धर्तियात्रा सम्झेर खुशी भयौं । हामीले साधारणतया १८–२० हप्तामा गरिने पहिलो अल्ट्रासाउण्डमा थाहा हुने बच्चाको लिङ्गबारे केही सोधेनौं । हामीलाई पु र स्त्री कुन लिङ्ग हो भनेर कहिले पनि सोध्ने आवश्यकता परेन । किनकी हामी कुनै Specific लिङ्ग भन्दा पनि यो अनौठो जिन्दगीको महा अनौठो खेलमा भगवानको यथोचित साथले दङ्ग थियौं । सायद डा. आभा र उनको टिमलाई हामीलाई हाम्रो सन्तानको लिङ्गको कौतुहलता र भोक नजागेकोमा खुशी लाग्यो होला ......।
मलाई डाक्टर, भगवान र पैसा एक त्रिशुलका ३ चोसाझै लाग्छ । पैसा तिरेपछि डाक्टरले बच्चाको लिङ्ग बारे भन्न सक्छ तर पैसा तिरेर भगवानलाई लिङ्ग निर्धारणमा कर गर्न सकिन्न । प्रसबको अन्तिम बेदना सम्म मेरी श्रीमतीले कुनै लिङ्ग विशेषको जन्म दिदैछु भन्ने उनलाई थाहा नहोस ताकी यो अनविज्ञताले उनलाई अझ बढी शक्ति मिलोस भन्ने मेरो सदैव चाहना हुन्थ्यो । हरेक व्यक्तिले सृष्टिको महत्व बुझ्नुपर्दछ तब मात्र जिवन सार्थक हुन्छ । भगवानले हरेक बच्चालाई भविष्यमा बाबु र आमामा रुपमान्तरण गर्छन्, एउटा बिज बोट बनेर उसले आफ्नो धर्म पुरा गर्दछ । यो जिवनको कठोर परीक्ष्ाँ हो । हिमालबाट बगेको खहरे सागर सम्म पुग्छ अनेक जाघर पार गरेर, जिवन त्यस्तै हो । आजको आफ्नो सन्तानले हिजोको आफूको याद दिलाएर जान्छ । बच्चाहरुले आमाको गर्भमा आफ्नै मुटुले स्वास फेर्दा उत्पन्न हुने बाडुली, अनि फुटबल मैदानमा फ्रिकिक हाने झै हान्दा उत्पन्न हुने कम्प र स्तनपान गराउदा आमाको नसा नसामा नाच्ने खुशीयाली पुरुषले प्रत्यक्ष्ँ अनुभव गर्न नपाए पनि त्यो दुवैमा साझा सम्पत्ती हुन् । यसमा दुविदा नै छैन । समय र साथले यी सबै कुराको अनुभव दिलाउछ ।
नाक कान छेड्ने त सामान्य बहसका कुरा न हुन् । यो भन्दा अरु धेरै कुराहरु जन्मसंगै आउदछन् । हामीले जन्म संगै सन्तानसंग अनगिन्ती आशा र सपनाहरु बुनेका हुन्छौं , मलाई अभिभावकले जन्म दियौं, हुर्कायौ, बढायौं, खुशी, सुरक्षा दियौं भनेर अप्रत्यक्ष्ँ सावा र व्याज माग्नु त्यति न्यायोचित लाग्दैन, सन्तान भनेका Salary man पटक्कै होइनन् जसले लगानीकर्तालाई तुरुन्त नाफा दियोस वा फाइनान्समा डिपोजिट गरेको क्यास जसले महिना महिना इन्ट्रेस्ट दिन्छ । सन्तान र बाबुआमा विच आध्यात्मिक बुझाई हुनुपर्दछ । ओशोले एउटा पुस्तकमा भनेका छन् – अभिभावकले आफ्नो सन्तानले आफुले पुरा गर्न नसकेको काम पुरा गरोस भन्ने आकांक्षा राख्दछन् । यो आफैमा विरोधाभासयुक्त छ । हामी पुरा नभएका आफ्ना सपना पुरा गर्न सन्तानलाई खेतला बनाइरहेका छौं । ओशो भन्छन् ः रुख चढ्न लागेको बच्चालाई तल नतान माथी पु¥याउन सहयोग गर । के हामीले हाम्रँ बच्चाहरुलाई यो वातावरण दिएका छौं ?
मेरी एकजना साथी छिन्, श्रीमान अरबमा काम गर्छन र उनी काठमाडौंमा सानो तिनो काम गरेर छोरालाई काठमाडौंको महंगो बोर्डिङ्गमा पढाइरहेका छन् । पछिल्लो समय उनले मलाई छोराले पढाइमा मिहिनेत नगरेको, आफ्नो सबै भौतिक मानसिक आर्थिक लगानी डुब्न लागेको र आफू साह्रै तनावमा गुज्रिएको बताइन् । मलाई लाग्यो उनले बेलैमा छोरालाई राम्रो Counseling गर्न सकिनन् वा गर्ने क्षमता उनमा भएन । परिवारको मुख्य पुरुष पैसा कमाउन बाहिर बस्न विवस छ । गफकै क्रममा उनले S.L.C. पछि छोरालाई इन्जिनियर, डाक्टर नै बनाउन आफूले चाहेको बताइन् । मलाई लाग्यो हाम्रो अभिभावकमा किन बच्चालाई एउटा राम्रो राजनितिज्ञ, लेखक, साहित्यकार, अनुवादक आदि होस भन्ने चाहना बन्दैन ? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो,, आजकल कुन देश, कुन शिक्षा भनेर हामी नराम्रो प्रतिपर्धामा फसेका छौं । हाम्रो अर्गानिक पद्धति बच्चाहरुलाई यहा जबरजस्ती खुवाइरहेका छौं, घोकाइरहेका छौं । उनीहरुको मनोविज्ञान कमै बुझिएको छ । यसले भोलिको समाजमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । जबरजस्ती अग्लिने बास र उत्तिस रोपिरहेका छौं आज हामी समाजका चौतारीमा ...................... ।
एउटा प्रसंग जोड्न मन लाग्यो । एक दिन दुईजना पर्यटकको गाइड बनेर बसन्तपुर कुमारीघर छिरे । विदेशीलाई माथी वार्दलीबाट सानो कुमारी झ्यालबाट कुमारीले दर्शन दिइन् तलबाट उनीहरुले जिवित देवी कुमारीलाई नियाले । मलाई एउटी सानी वर्ष झण्डै ७–८ की एक अवोध बालिकालाई समाजले संस्कृतिको नाममा अनेक लुगा पहिराएर जिवित देवीको नाम दिएर उनका परिवार साथीभाई विद्यालय, उनको आफ्नै संसारबाट तानेर एउटा सामन्तको प्रतिक दरवारको कुनामा लडाइरहेको जिउदो लास जस्तो लाग्यो । म केही नेपाली आगन्तुक जो कुमारीलाई केही नगद र फलफुल चढाएर ढोग गरिरहेको लाइनमा पुगे कुमारी दर्शनको खातिर । मैले फुल पनि चढाइन, न त दाम फाले कुमारीको साना पाउमा, उनको आखामा आई कन्ट्याक्ट गरेर उनको भाव अध्ययन गरे । कुमारी मेरो लागि औसत बालबालिका भन्दा कमजोर, लजालु, बोधो, असान्त लाग्यो । उनको भित्री भावले मलाई भने जस्तो लाग्यो– हे दाई, अंकल मलाई यो ठाउमा बस्न मन छैन, मेरो जन्मघर साथीभाई समिप लैदेउ, मलाई मेरो बालसखीहरुसंग खेल्न मन छ, मलाई मेरो अभिभावकसंग बस्न मन छ, उनीहरुको काखमा सुत्न मन छ । मलाई यो जेलबाट मुक्त गर, विन्ती छ मलाई कुमारीको रुपमा कुनै महाराजले तात्कालिन समयमा चलाएका कुप्रथाबाट विदा देऊ आदि आदि,
मलाई लाग्यो देशकै विद्धानहरु बस्ने यो सहरमा एक नारीलाई यो संस्कारको साङ्लोले कहिलेसम्म बाधिरहने ? अरु कति अवोध बालिकालाई जिवित कुमारी भन्दै उनीहरुको स्वतन्त्रता लुट्ने ? ढलेका दरवारबाट अब सुगा उडाइदिउ नया व्यवस्थामा अव यो सुहाउदैन । अनि पहिला कुमारी प्रथा हटाऔं अनि देउकी उन्मुलन गरौला ।
मेरो प्रश्न र मनमा लागेको कुरा यो हो की के शिव शर्माले ७ वर्षकी गोमा ब्राह्मणी लगे भन्दैमा अझै हामीले त्यसलाई मान्ने ? के सन्तनु राजाले आफ्ना सन्तान नदीमा बगाए भन्दै बगाउने ? के राम लक्ष्मण बनबास गए भन्दै हाम्रा सन्तानलाई बनबास पठाउने ? द्रोणलाई औला सुम्पने ? द्रौपदीलाई साझा भोग गरिरहने ? हाम्रा धर्म र कर्म यति धेरै उट्पट्याङ्गले भरिएको छ जसलाई हामीले गरेर होइन पढेर आनन्द लिन सक्छौं भुत बुझ्नलाई ।
बच्चाहरु प्रकाशकले बजारमा फालेका पुस्तक जस्तै हुन्, जसमा लेखकको कन्टेन्टमा कन्ट्रोल गुमिसकेको हुन्छ । त्यस्तै बच्चाहरु धर्तिमा जन्मीसकेपछि आफ्नै सम्भावना र चुनौती लिएर आएका हुन्छन् । उनीहरुलाई जन्मको नातासंग जोडेर गोडमेल गर्ने नाममा तोडमोड गर्न मिल्दैन । मलाई त यस्तो लाग्छ, तपाइहरुलाई नि ?